UANDREW WK: NDIFUMANA UPHONONONGO LWEALBUM EMANZI - IINDABA
Iminyaka elishumi ukuya phambili, ipati ye-albhamu ka-Andrew WK isaqhubeka, kwaye ikhutshiwe ngokukhutshwa kwakhona kwe-deluxe kubandakanya ukusikwa kunye neidemo. Nokuba ucinga ukuba ezi ngoma zibukrelekrele, zizidenge, okanye zizidenge, abaphulukananga nenye yazo.
Makhe ndiyisuse endleleni kwaye ndamkele wonke umntu ocofe apha ngethemba lokungqina elona nani likhulu likaPitchfork I-MEA culpa ngonaphakade. Iminyaka elishumi lixesha elide lokuba iidiliya ezimuncu zivundiswe, kwaye ndiyathemba ukuba zimnandi. Mhlawumbi uvile ukuba khange sibonakalise ububele ku-Andrew WK ixesha lokuqala ngeenxa zonke. Ngokucacileyo andivumelani noRyan Schreiber's uvavanyo lokuqala , kodwa nokuba ibingeyonto ihlwempuzekileyo ukukhupha esidlangalaleni umphathi wakho ngezimvo azibambe kwiminyaka elishumi ngaphambili, andikho kwimeko yokugweba. Nam ndizama ukuhlala phantsi ngokuzisola ngokulinganayo (ukuba kude kufihlakele) ukuphononongwa kwe Ndiba Manzi Kwiphephandaba labafundi eliye laya kwicala elichasene ngokupheleleyo, lingayincomi kangako ngexabiso layo lomculo njengokukwazi kwayo ukudibanisa ne-Adderall kunye ne-Keystone Ice ukwenza ikholeji ephezulu yeZiqu zithathu yokunxila. Kwakukho kwaye kuyirekhodi ekhuthaza ukusabela okugabadeleyo. Kwaye uninzi lwethu kubonakala ngathi lwenzile Ndiba Manzi Inkcitho enkulu izama ukuyicacisa kumacala omabini. Ngoku silapha kwiminyaka eli-10 kamva kwaye akukho nto itshintshileyo malunga nerekhodi ngaphandle kobudlelwane bethu nayo. Nangona abagxeki baka-Andrew WK babedla ngokufakwa uphawu njengamapolisa amnandi kunye nabalandeli bakhe babecinga ukuba bazizidenge okanye ayinyangeki, Ndiba Manzi lirekhodi elilodwa, kwaye uluvo lwakho alunakho ukwenza inqaku elikhulu ngayo nayiphi na enye into. Yinto nje ngu.
umculo ophezulu we-100 2017
Kwakungolunye lweemvavanyo ezinkulu zokugqibela zelebula. Ukuza ngexesha laxa iNew Rock Revolution yayenzelwe ukuba isuse i-nu-metal, yayichasene ngokungqongqo nengqondo, ngokungathandabuzekiyo ukuba yintengiso, kwaye ukhe wayiva phantse kuyo yonke indawo. Kwiminyaka elishumi epheleleyo kamva, u-Andrew WK igcina ijusi yenkcubeko eyoneleyo ukuze iphele kumabonwakude rhoqo. Ngokomculo, Ndiba Manzi khange aqalise ntsingiselo kwaye akachaphazelekanga namnye. Ihlala igculelwa njengenye yezona rekhodi zintle zakha zenziwa, kodwa ndivile iingxoxo ezinyanzelisayo nezingqinelanayo xa zithelekiswa ne-Daft Punk Ukufumanisa kwindlela ephatha ngayo imincili njengohlobo lomculo uqobo.
Asingomsebenzi wempikiswano ebangel 'umdla, iingqimba zenkohliso, okanye ubuhlakani besilumko. Kodwa ngaba ufuna ukuguqula irekhodi lengoma yalo yokuqala ebizwa ngokuba 'Lixesha lePati' ukuba libe ngumsebenzi wezifundo? Uninzi, kubandakanya u-Andrew WK ngokwakhe, ndizamile ukubumba 'ipati' njengesixhobo sokwazisa okanye ifilosofi yeZen, kodwa yiza ne-fuck: Ayenzi nto intsha nangayiphi na indlela yobuchwephesha ukuba ubukwibala le-basketball nanini na ebomini bakho. Kwaye okwangoku, ekuphela kwempendulo yokuva ukubethwa kweekatala, imigqomo yokukhaba, kunye neokhestra yomgunyathi ukusuka 'lixesha lepati' yile, 'Yeyiphi le nto ngu Okanye ukubuyela umva kwindawo yokuma, emva koko imizuzwana engama-90 elandelayo akufuneki ichithwe kujikeleziswe nayiphi na impahla yendlu enokutsha okanye enokutsha. 'Iqela elinzima' yingoma elandelayo kwaye ekuvezeni okokuqala, ezi zimbini zinokubonakala ngathi yimizuzu emihlanu emikhulu yomculo owakhe weva.
Nokuba ucinga ukuba ezi ngoma zibukrelekrele, zizidenge, okanye zizidenge, Ndiba Manzi ilula ngokulula. Nangona ibekwe kumnombo wentsimbi yeenwele, akukho phantse ukukhanya kobuchwephesha, akukho bhaladi yamandla, nokuba ikwinto enye encinci. Olona hlobo lokumodareyitha luyinto eyenzekileyo kwikhorasi ethi 'Amantombazana anothando lwaKhe', enokuthi okanye ingabi nje IHysteria ukusika okunzulu kudlalwe kabini isantya. Iingoma ezihambelana nelizwi elithi 'Iqela Elinzima' zixinaniswe zaze zankulu kangangokuba uncuthu lwengoma alushukumi, lusenza olona lula kwaye okona kulungileyo ingoma yekaraoke nanini. Nokuba 'uMbutho onzima' unamazwi ngayo nayiphi na into eyenye, isengayi-keg-rock legend esekwe kwiiriffs zayo zodwa- zezona zibalaseleyo Ndiyafumana Imanzi , ezibenza babe ngabona bane bagqwesileyo kuloo nyaka. Kodwa ngokungafaniyo naleyo ithi, Iiseli eziMhlophe zeGazi , zivakala nje gwenxa ukubethwa kwikatala enye. Inani elingenakwenzeka lezwi kunye neekatala ezingaphezulu kwi-'Yikhuphe 'iyityhalela ngaphaya kokungaziqondi izihlangu. Awunakuwuqhawula umtshato nefuthe le- Ndiba Manzi ukusuka kwiimvakalelo zayo, kwaye umculo ngowona myalezo: 'Lixesha lePati' ngokukhawuleza Ndiba Manzi Impembelelo engapheliyo, imvakalelo efanayo yokungena ngaphakathi esiswini yokukhwela i-roller coaster, ukubuza umntu ngaphandle, okanye ukujonga iakhawunti yakho yebhanki emva kwempelaveki ekhohlakeleyo. Kuyonwabisa, kuyacaphuka, akukho kubuya mva.
Kodwa ngelixa Ndiba Manzi ngu-Andrew WK ogqibeleleyo icwecwe, alikho icwecwe elifanelekileyo. Enye into, kukho iingoma ezizama ngokwenene ukwenza uhlobo oluthile lwesiteyitimenti esihambelanayo kwaye zinako ngokunokwenzeka thatha uhlobo oluthile lwe-post-9/11 efanelekileyo ('Ndiyayithanda i-NYC', 'Ndikulungele ukufa'). Kodwa bayazonwabisa ngokungonwabisi njenge 'Party Hard' kuba bayayenza akukho ngqiqweni . Abaninzi bayeva Ndiba Manzi njengerekhodi lokuhlekisa okungenanjongo, kodwa 'Ndiyayithanda i-NYC' iwela kummandla we ngabom umdlalo ohlekisayo kuba andiyicingi nokuyithetha ngesiXeko saseNew York. Okanye nayiphi na isixeko. 'Umhle' kwaye 'Amantombazana aLuthando lwaKhe' bobabini basilele ngobuqhetseba nangaluphi na uhlobo lwenkanuko, abafazi bajongwa njengezitya nje zokubonisa inkanuko yamadoda kodwa nangaphaya kokuqonda. Ziingoma uBarbie kunye noKen abanokuthi babhabhe kuzo. Inqaku kukuba, kwi-albhamu ekucingelwa ukuba iyabhexisa nayiphi na intetho ye-nuance, inemicimbi eqhelekileyo. Kwaye isiqingatha sesibini sibuthathaka kakhulu kunesokuqala. Ukuba awundikholelwa, buza nabani na obonakalisiweyo Ndiba Manzi Isikhumbuzo seminyaka eli-10 sibonisa imizuzu engama-20 emva kwexesha. (UDude uyathanda ukuya epatini kodwa ufike ngokukhawuleza.)
Inxalenye yoko ayinakuphepheka kuba nayiphi na irekhodi eqala 'liXesha lePati' kunye 'neQela elinzima' alishiyi igumbi elininzi lokwakha kwindlela ephezulu. Kodwa ngelixa i-'Part Til You Puke 'sisiphelo se- Ndiba Manzi 'Party' trilogy, ikwayindawo apho iingcinga zexesha elidlulileyo, langoku, okanye ulwahlulo oluzayo luye lube nengcinezelo enganyamezelekiyo. Isantya esikhawulezileyo somnxeba kunye nesandi sokuphendula siyenza ibe sisikhalo esinqabileyo se 'CHUG,' kwaye kwangoko emva koko, 'Ubusuku obonwabisayo' nguloo mfana ukukunika ibhiya erally kwindlu yangasese xa unokuthi 'ayikho ngoku, bhuti . ' 'Kufuneka Uyenze' ngu 'Uthando Lwamantombazana' lubonwa ngamehlo engwe, kwaye nangona ndinayo le rekhodi phantse ishumi leminyaka, ukuza kuthi ga namhlanje andikhumbuli ukuba ithrekhi yesihloko ivakala njani. Kwityala layo, 'Musa ukuyeka i-Livin' kwi-Red 'yeyona ndlela ekuphela kwayo ekunokuphela ngayo le rekhodi, kwaye kulungile ukuyibona imfumana Intengiso ekujoliswe kuyo imali nangona kunzima ukuyicingela, ewe, isiciko esivelisayo esivelayo kwiindawo zokuthengisa kwiivenkile ezinkulu. Ke ndicinga ukuba kukho isigqebelo kwenye indawo kuko konke oku.
Ukuya kuthi ga ekuphumeni kwakhona, kufanelekile ukuba uphonononge ukuba awuphakathi kwabalandeli baka-Andrew abamhlophe. Kukho ibhetshi yeengoma ezibukhoma ezinomdla kwaye zibhalwe ngenjongo yokuba uAndrew WK kanye wachaza kum ukuba yintoni yena uva xa eseqongeni. Ndingathi iidemos kunye nezinye izinto ezizithathayo zinomdla ongaphezulu kunokuba umbono we Ndiba Manzi okokhe wabakho njengedemo kuyonwabisa - khawufane ucinge uAndrew WK sizingele isiginkci somculo sizama ukugqibezela 'Senza oko sikuthandayo…' nge lyric eyiyo.
Ukuba uneminyaka engama-20 ubudala kwaye ungeva Ndiba Manzi okwangoku, qhubeka uyonwabele ngelixa usenakho. Kodwa andizukukholisa ukuba imiba ngengqondo enkulu nangona injongo ebonakalayo yayo nakuphi na ukuphinda ikhuphe, ngakumbi kwimeko apho eyokuqala ingashicilelwanga, kukomeleza okanye ukuphinda uvavanye. Oko akuyomfuneko nge Ndiba Manzi . Akuninzi uAndrew WK uyenzile okanye ungayenza emva kokuba irekhodi likhulule, lithethelele, okanye ungqinele uluvo lwakho malunga nalo. * Malunga nonyaka onesiqingatha emva kokuba lisilele ukutshisa iitshathi, Ingcuka yenzekile, kwaye ngelixa irekhodi elungileyo ngokugqibeleleyo, ixabiso layo libonakaliswe ngokupheleleyo kuluncedo lwenqanaba lokunyathela; ngokuqinisekileyo kwibhodi yemiyalezo kwenye indawo, umntu othile uthatha ulwaneliseko olukhulu ngombono wakhe ukuba kunjalo ngcono kunokuba Ndiba Manzi.
I-justin bieber cds entsha
U-Andrew WK uye wenza ezinye iirekhodi kwisikali esincinci kakhulu nesilandelwa ngokwamasiko, ekusenokwenzeka ukuba senzeka kusuku lokuqala. Ngaphandle kokungabikho kokwahlukana phakathi kuka-Andrew Wilkes-Krier kunye nokuphila kwakhe, umntu ophefumlayo uyaqhubeka, kwaye kubonakala ngathi akaluphelelanga usuku kule minyaka ilishumi idlulileyo, nto leyo mhlawumbi iqinisekisa ubume berekhodi, engoyikiyo *. ubomi butshintshe kakhulu okoko ndaqala ukubonwa Ndiba Manzi kwaye mhlawumbi ndijikeleza le rekhodi kube kanye ngonyaka, andikacingi ukuba ikhe yabakho ialbham eyenza umsebenzi ongcono, ngelixa idlala, ngokundenza ndiqiniseke ukuba kuphela komculo endiya kuwufuna ubomi bam bonke .
Imil miller kendrick lamar
yg ebomvu ngolwe-Zip
Umsindo ngokuchasene nohlobo lomatshini
phantom iplanethi undwendwe
dmx icwecwe elitsha 2021